Magaala biddeena argachuun itti hin yaadamne-Leegoos, Naayijeeriyaa - BBC News Afaan Oromoo
Magaala biddeena argachuun itti hin yaadamne-Leegoos, Naayijeeriyaa
24 Amajjii 2018
Image copyright Bethelehem Berihane
Beetaliheem Biraaneen jedhama. Naayijeeriyaa Leegoosin jiraadha. waajirri ani keeessatti hojjedhu Janaraal Elektiriik jedhama. waajirichi sagantaa barnoota digirii lammaffaa qaba. Ji'a jaha jahaan biyya jijjiiraan hojjedha.
Naayijeeriyaan biyyaan hojiidhaan itti imale ishee arfaffaadha. Hagayya darbe waan ta'eef kaniin gara kanatti dhufee dhuma ji'a kanaatti turtiin koo ji'a jahaa ni xumurama.
kanaan dura ji'oota jaha jahaaf biyyootan itti hojjedhe kessaa inni duraa Naayiroobii, achiin Johaanisbargi yommuu ta'u gara Leegoos dhufuu koon dura ammoo Hangaarii Budaapeestiin ture. kanatti aane gara Finfinneetti waanan deebi'u natti fakkaata.
Leegoosii fi Finfinnee
Leegoositti Intarneetaan wantoota hedduu bitachuun ni danda'ama. lafan Biyyattiifi uummatichaaf keessummaa ta'etti nyaata ajajuufii waa bitachuuf daldalli Intarneetaa jiraachuun jireenya koo si'ataa naaf godheera.
Kaardii baankii of harkaa qabuun waanan barbaadu bitachuu dand'uun koo Leegoos Finfinneerra akka wayyoo qabdu akkan yaadu na dirqisiiseera.
Magaalittiin miiraa biyyoota dhihaa calaqqisiifti. Tarii bittaa kolonii jala waan turteef ta'uu danda'a. Bakki aadaan biyyasaanii itti calaqqisu jiraatus harka caalu jirenyii isaanii jireenya waarra lixaa fakkaata.
Anaaf wantin baayyee barbaachisaadha jedhu biddeena. Biyyootan itti hojjedhe hedduu keessa biyyi biddeen argachuun rakkisaa itti ta'e Leegoosi. Biyyin biddeena osoo hin nyaatiin yeroo dheeraa itti tures Leegoosi.
Sababa kanaanis nyaata biyya sanaatti baruun qormaata natti ta'ee ture. Dhamdham isaatiinis foolii isaatiinis is kan keenya irraa adda.
Magaalaa Leegoositti barbaadee, feedhiin nyaataa koo banamee kaniin nyaadhu nyaata aadaa isaanii ruuzuu irraa hojjetamu Pilaanteeyiin jedhamuu, kan muuzii irraa hojjetamu Jooloof jedhamuu fi Xibsii Gogaa isaan Suuyaa jedhanii waamanii dha.
Image copyright Bethlehem Birhane
Biyya koon yaade
Itoophiyaatii kaniin yaadu nyaataa dha. Yeeroon as jirutti wantoota Itoophiyaa na yaadachiisan keessaa tokko huccuu aadaa isaaniiti.
Jimaata jimaata huccuu aadaa uffatu. Wayita cidhaattis akkasuma. Uffanni isaanii isa kan biyya keenyaa fakkaachuu baatus biyya koo garuu na yaadachiisa.
Karaa foddaa mana kootii gamasitti yommuun ilaalu wanti na gammachiisu riqicha isa guddaa Afrikaa garba irratti ijaarame arguudha. Argaan riqicha kanaa sammuu koo haaromsa.
Image copyright Bethlehem Berhane
Gara Leegoos dhufuukoon dura akkan of eeggattu ta'u kan na godhe namoota dirqiin qabanii to'achuu isaanii dhagahuu kooti.
Nama fedha malee butuun gosa lama akka qabu natti himan. Inni duraa hojii afuuraaf nama fudhatu inni lammataa nama aangoo qabu yoo ta'e butaaniit maalaqa gaafatu.
Odeeffannoon kun akkuman dhufeen biyyaatti keessa deemee akkan hin ilaalle na godheet ture. Suuta suuta wayitan baraa deemu garuu akka jedhame akka hin taanen arge.
Obbo Tasfaayee Urgeerratti manni murtii akeekkachiisa waliin guyyaa eeyyame
Pirezidaanti Isaayaas maaf Itoophiyaatti deebi'an?
'Harma hodhanii guddatan hin ciniinan'
Appilikeeshinoota kanneen sadii mobaayilii irratti hin fe'inaa
Abbaan Vinseent Kompanii kantiibaa ta'an
Beela Yaman waggaa 100 keessatti hammaataa ta'e
Somaaliyaatti himatamaan dhohiinsa boombii isa cimaa jedhame du'aan adabde
''Dr Abiy Oromoo biratti damma damma caalu''
Xiyyaarri namarra ba'ee sadii galaafate